polyacrylamide ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ၏အိုင်းယွန်းအမျိုးအစားကိုဘယ်လိုခွဲခြားရမလဲ Oubo
ion အမျိုးအစားအရ polyacrylamide ကို anionic polyacrylamide ဖြစ်သည် ,cationic polyacrylamide နဲ့ non-ionic polyacrylamide .
polyacrylamide ထုတ်လုပ်သူသည် polyacrylamide ion အမျိုးအစားကိုဘယ်လိုခွဲခြားသတ်မှတ်သလဲ။
Polyacrylamide ထုတ်လုပ်သူများသည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဓာတ်ခွဲခန်းများတပ်ဆင်ထားသည်။ နေ့စဉ်ထုတ်ကုန်များ၏နည်းပညာဆိုင်ရာညွှန်းကိန်းများကိုစစ်ဆေးခြင်းအပြင်ဓာတ်ခွဲခန်းတွင်ပြင်ပနမူနာများကိုလည်းစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ပြင်ပနမူနာတစ်ခုကိုလက်ခံရရှိသည့်အခါကုန်ပစ္စည်း၏အိုင်းယွန်းအမျိုးအစားကို ဦး စွာတွေ့ရှိရမည်။ ဒီတော့ ion type ကိုဘယ်လိုခွဲခြားမလဲ။ အဖြေမှာနိုင်ငံခြားနမူနာများကိုရှာဖွေရန်အတွက်နည်းပညာညွှန်းကိန်းများဖြစ်သည် anionic polyacrylamide နှင့် non-ionic polyacrylamide တို့သည် hydrolysis ၏အတိုင်းအတာကိုခွဲခြားသိမြင်နိုင်သည်။ anionic polyacrylamide ၏ hydrolysis ၏ 25 သည်ပတ်ပတ်လည်သည်နှင့် non- ionic polyacrylamide ၏ hydrolysis ၏ဒီဂရီ 5.5ပတ်လည် Cationic polyacrylamide အိုင်းဒီဂရီဖော်ထုတ်ခြင်းအားဖြင့်ခွဲခြားသည်နှင့်ခြောက်သွေ့မှုန့်ထုတ်ကုန်များ၏အိုင်းဒီဂရီများသောအားဖြင့် 10-60 အကြားအတက်အကျ။
ရိုးရှင်းသောစမ်းသပ်မှုတစ်ခုမှတဆင့် polyacrylamide ion အမျိုးအစားကိုမည်သို့ခွဲခြားမည်နည်း။
၀ န်ထမ်းများအရောင်းအ ၀ ယ်နေရာတွင်သို့မဟုတ်စမ်းသပ်ကိရိယာများမရှိပါက polyacrylamide ၏အိုင်းယွန်းအမျိုးအစားကိုမည်သို့ခွဲခြားမည်နည်း။ ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်တို့သည် anionic polyacrylamide နှင့် cationic polyacrylamide နမူနာရှိရန်လိုအပ်ပြီး၎င်းထုတ်ကုန်နှစ်ခုကိုသီးခြားစီအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။ ထို့နောက် ion အမျိုးအစားကိုရှာဖွေရန်နှင့် yin နှင့် yang တုံ့ပြန်မှုကိုခွဲခြားရန်လိုအပ်သည့်ထုတ်ကုန်ကိုဖျက်သိမ်းပါ။ စမ်းသပ်ပြီးခံရဖို့ထုတ်ကုန်ဖြေရှင်းချက်သို့ပျော်ဝင်ပျော်ဝင် anionic polyacrylamide ဖြေရှင်းချက်ကိုငါသွန်းလောင်း။ အဖြူရောင် flocs များများပေါ်လာလျှင်, ဒါကစမ်းသပ်ပြီးနမူနာ cationic polyacrylamide ကြောင်းဆိုလိုသည်။ တုံ့ပြန်မှုမရှိပါက၎င်းသည်အိုင်းယွန်းနီယမ်မဟုတ်သောသို့မဟုတ် anionic ဖြစ်သည်။ ထိုအခါ cationic polyacrylamide ဖြေရှင်းချက်အားဖြင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်, flocs သေးငယ်တဲ့ငွေပမာဏစမ်းသပ်ပြီးထုတ်ကုန် Non-ionic polyacrylamide ကြောင်းညွှန်ပြခြင်း, flocs ၏ကြီးမားသောပမာဏစမ်းသပ်ပြီးနမူနာ anionic polyacrylamide ကြောင်းဖော်ပြသည်။
site ပေါ်တွင် flocculation အတွက်မည်သည့်ထုတ်ကုန်ကိုအသုံးပြုသည်ကိုသင်မသိသောအခါ, polyacrylamide ion အမျိုးအစားကိုဖော်ထုတ်အသုံးပြုသူများသည်မော်ဒယ်များကိုလျင်မြန်စွာစစ်ဆေးနိုင်ပြီးပိုမိုမြန်ဆန်စွာ on-site ရေဆိုးနှင့်လိုက်ဖက်သောထုတ်ကုန်များကိုရှာဖွေနိုင်သည်။
အသုံးပြုသူများသည်ကုန်ပစ္စည်းကိုပိုမိုနားလည်နိုင်ရန်၊ ကုန်ပစ္စည်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောကုန်ပစ္စည်းဂုဏ်သတ္တိများဖြင့်အသုံးပြုရန်၊ သတိပြုရန်နှင့်စားသုံးသူများကိုလှည့်ဖြားသူများအားသတိပြုရန်အတွက် polyacrylamide ion အမျိုးအစားကိုခွဲခြားသိမြင်ရန်လေ့လာပါ။
805Room, No.13, B, ဇုန်, Wanda Mansion, Qingdao, ရှန်ဒေါင်းပြည်နယ်
မိလ္လာကုသမှုအတွက် flocculant ၏အခန်းကဏ္.ကို
t တွင် polyacrylamide အသုံးပြုမှုအသေးစိတ် ...
မြူနီစီပယ်တွင် Polyelectrolyte ကိုအသုံးပြုသည်။
သတ္ထုတူးဖော်ရာတွင် Polyacrylamide ကိုအသုံးပြုခြင်း
© Copyright 2011-2020 Oubo Chemical All Rights Reserved ။